Raiisul wasaaraha Somalia oo Maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho – SBC
Raiisul wasaaraha Somalia oo Maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho
Raiisul wasaraha Dowlada KMG ah ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa Maanta dib ugu soo laabtay dalka isagoo ka soo degay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cade International Airport ee magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Raiisul wasaaraha iyo Wafdigiisa ayaa waxa ay ka soo kici timeen dhanka Magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas oo uu kula soo qeyb galay kulankii Qaramada Midoobay ee Halkaasi ka dhacay, isagoona halkaasi ka jeediyay Qudbad taabaneysa xaaladaha dalka gaar ahaan tan qilaafka u dhexeeya xukuumada ee ku aadan Doorashooyinka dalka .
Wafdiga la socday Raiisul wasaare Farmaajo ayaa waxaa ka mid ahaa Lataliyaha dhinaca Warfaafinta ee Xukuumada Raiisul wasaare Farmaajo iyo Qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo Xildhibaanada DKMG ah .
Raiisul wasaare Farmaajo ayaa markii uu ka soo degay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cade Airport waxa uu saxaafada siiyay hadal kooban oo uu kaga warbixiyay xaalada dalka iyo kulamo uu soo yeeshay intii uu dalka dibadiisa ku sugnaa gaar ahaan intii uu ku sugnaa wadanka Mareykanka .
Wasa uu raiisul wasaaraha sheegay sidoo kale in kulamo badan uu la soo yeeshay Jaaliyadaha Soomaalida ee ku dhaqan dalka Mareykanka islamarkaana uu kala hadlay wax qabad dalka loo qabto iyo in uu ka soo dhaadhiciyay dhinacyada uu la soo kulmay suurto galnimada mudo dheeraad ah oo loogu kordhiyo xukuumada iyo Madaxweynaha DKMG ah.
Ugu dambeyntii Imaatinka raiisul wasaare Farmaajo uu maanta dalka dib ugu soo noqday ayaa waxa uu ku soo aadayaa xili ay xaalada Magaalada Muqdisho tahay mid ay ka soconayaan dagaalo xoogan islamarkaana ay ciidamada DKMG ah ay guulo ka soo hoyeen.